Katsi dzinoenda kumwedzi here? | Noti Katsi
Katsi dzine nguva dzekuenda kumwedzi here?
Kana isu takambogara nembwa yatisingafanirwe kutemesa, zvirokwazvo kana tichienda nekatsi kumba tinoshamisika kana furry yedu nyowani ine nguva yayo kana kuti kwete. Uye zvechokwadi, nepo mune dzimwe mhuka chiri chinhu chinowanzoitika chevakadzi, mune vamwe ... kwete. Muboka ripi iri feline?
Zvakanaka, Kana iwe uchida kuziva kana katsi dzichienda kumwedzi, saka tiri kuzotaura newe nezvazvo.
1 Iko kushingairira kwekatsi kuri sei?
1.1 Zvikamu zvekupisa
2 Katsi dzine nguva here?
3 Matipi ekuti katsi yako iri kupisa
3.1 Gadzira yakasununguka mamiriro
3.2 Dzivisa kunetseka
3.3 Ngwarira kwazvo kana iwe usiri kuda nhumbu isingadiwe
Iko kushingairira kwekatsi kuri sei?
Kuti upindure mubvunzo wekuti vane nguva yekuenda kumwedzi here kana kuti kwete, isu tinofanira kutanga taziva kuti kupisa kwekitsi kwakamira sei, nekuti nenzira iyi tichanzwisisa zvirinani mashandiro anoita huturu hwedu "anoshanda". Zvakanaka. Iko kupisa kwekitsi kunotongwa neyakaitika mwaka, inoenderana nechirimo uye kudonha, inova iyo mamiriro ekunze anonakidza zvakakwana kuti vana vawane mukana wakakura wekupona.
Vanogona kuva nekutanga kupisa kwavo pakati pemwedzi mitanhatu nemasere ekuberekwa, asi izvi zvinoenderana zvakanyanya nemamiriro ekunze (kana kuchidziya, vanogona kuva nazvo nemwedzi mishanu), pakukura kwavo uye kana paine katsi dzakawanda kumba.
Iyo yekubereka inotenderera yakakamurwa muzvikamu zvina:
proestrus: inotora pakati pe1 ne3 mazuva. Zvichava apo patinoona kuti ane rudo rwakanyanya kupfuura zvakajairwa, kunyangwe isu tichigonawo kuona kuti anodya zvishoma uye / kana kuti meya yake yakapinza uye ipfupi.
Oestrus: iko kushingairira kwacho. Inoita pakati pe4 ne6 mazuva. Ndiyo apo katsi inogamuchira murume. Muchiitiko chekuti kukwidza kukasaitika, kunogara pakati pemazuva gumi negumi nemana.
Iyo katsi ichadya zvakanyanya kuti ibudiswe mumba ichitsvaga kati.
Metaestro: inotora maawa makumi maviri nemana. Muchikamu chino, katsi nehasha inoramba nzira yeimwe katsi dzinoda kumukwidza.
Anestrus: ndiko kuderera kwepabonde kwekati. Inoenderera kusvika rinotevera rekubereka, iro rinogona kuve mavhiki maviri gare gare kana mwedzi 2-3 kana nhumbu yakaitika uye kana mamiriro ekunze akakodzera.
Katsi dzine nguva here?
Aihwa. Kuti ivo vave nazvo, ivo vanofanirwa kuvhara mazai, ndiko kuti, maovari aifanira kuburitsa mazai nguva dzose, izvo zvisingaitike. Muchokwadi, ivo vanongozviita chete kana kutasva kuchiitika. Neichi chikonzero, isu hatizoone - kana kusafanira kuona - chero chiratidzo cheropa.
Izvo zvinogona kuitika ndezvekuti vanomaka neweti, chimwe chinhu chinogona kudzivirirwa / kudzorwa kana tikachitora kuti titeme.
Matipi ekuti katsi yako iri kupisa
Sezvataona, kitsi hadzina nguva asi dzinopinda munguva dzekupisa uye kutenderera kwacho kunogona kunge kuchirova. Katsi dzine kupisa kwemwaka, uye inogara ichienderana muchirimo nematsutso. Sezvatambotaura pamusoro apa, zvinopinda muzvikamu uye ikozvino zvawava kuziva zvichave nyore kuziva kuti chikamu chipi chiri mukufunga zviratidzo zvinoratidzwa nekatsi yako.
Ichave hunhu hwavo hunokuyambira kana ivo vari mune chimwe chikamu kana chimwe, uye zvichave kubva pamwedzi 6-8 (dzimwe nguva zvisati zvaitika) yehupenyu hwako katsi paanotanga kupisa. Kana ichienda kuburikidza nezvikamu izvi, chipfuwo chako inoda kuti iwe utarise zvakanyanya.
Kuita kuti kufamba kwekupisa kuve nyore kwauri nekatsi yako uye kuti zvikamu hazvipedze kushivirira kwako, tiri kuzokupa mamwe matipi ekuti utore zvirinani. Katsi yako inokodzera rudo rwako uye nehanya yako yese, saka cherekedza zvese zvatichazotaura pazasi.
Gadzira yakasununguka mamiriro
Izvi zvinoreva kuti nharaunda yemba yako Inofanirwa kuve neyakagadzikana mamiriro ekunze uye kuti kati yako inonzwa kugadzikana mukati kumhuri. Iye zvino zvaunoziva kuti katsi yako haisvibise nekuti haina mutemo mukati mawo, iwe unofanirwa kungwarira kana achimaka dunhu nekuparara.
Mupfungwa iyi, izvi ndizvo zvaunofanira kutarisa zvakanyanya. Saka kuti parege kuva nezvinetso, zvakanaka kuti marara ako agare akachena. Kana katsi yako ichiramba ichiita weti munzvimbo dzisiri marara bhokisi, pane mapiritsi akagadzirirwa izvi.
Iwe uchafanirwa kupfapfaidza pamwe nekusasa nzvimbo idzo katsi yako inodonha (uye haifanire kuzviita), kuitira kuti kana iwe ukaedza zvakare, iwe unonzwa uchisemeswa nekunhuwa kwekupfapfaidza uye kurega kubva kuchinangwa chako chekumaka ndima kwausingafanire.
Kutevera yekutanga poindi yezano, zvakakosha kuti iwe uzive kuti katsi iri mukupisa isina murume, inogona kunzwa kumwe kunetseka. Nhau dzakanaka ndedzekuti iwe unogona kuzvidzivirira uye kuzvideredza nemamiriro ekunze ekuzorora uye kugadzikana kumba.
Iwe unogona kuisa gumbeze rinodziya kana chimwe chinhu chechinyaradzo chinogadzira runyararo uye chinozorora. Ehezve, pamusoro pekutora zvese izvi kufunga, zvakare zvakakosha kuti katsi yako inzwe rudo rwako rwekuwedzera. Saka nyatsoteerera kwaari, pamper iye uye uzive rwese rudo rwaanoda kuitira kuti kushushikana kwake kuenderere kumashure.
Ngwarira kwazvo kana iwe usiri kuda nhumbu isingadiwe
Kana iwe usiri kuda kuti katsi yako ive nepamuviri uye usati wamuendesa iye zvakadaro, iwe unofanirwa kumuganhurira rusununguko rwake rwekufamba muzvikamu zvekupisa.
Zvichienderana nenzvimbo yauinayo mumba mako uye kana iwe uchibvumira yakawedzera kana shoma rusununguko rwekufamba kunze kwemba yako, izvi zvinogona kuve nyore kana kuomera iwe. Kana iwe uri wako, katsi yako inogona kuuya uye kuenda paanoda nekuti haina miganho munharaunda, uchafanirwa kudzikisira mabudiro avo pese pandinenge ndiri pakupisa.
Ukasadaro, zvinowanzoitika kuti murume munharaunda achauya kunzvimbo iyo kati yako inofanira "kumukwidza". Kana izvi zvikaitika, unozobata pamuviri uye mumwedzi mishoma unenge uine kittens mumba mako. Kana iwe usiri kuda kuti izvi zviitike, ganisira kubuda kwake kana kungoita musangano kune vet kuti arapwe. uye haufanirwe kunetseka nezve ichi chakasarudzika.
Tinovimba yakave yakakunakira iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Katsi dzine nguva dzekuenda kumwedzi here?
magaly ramirez akadaro
Ndine chokwadi chekuti kati yangu iri kupisa asi haina kukuvara kana chero chinhu uye haina kutasva, zvisinei paakarara pamakumbo angu akasiya bhurugwa rangu rakasviba neropa.
Ane mwedzi gumi nerimwe, zviri normal here? ,: /
Pindura kuna magaly ramirez
Kwete, katsi hadzina mutemo.
Kana akasiya tsvina yeropa pauri, vet anofanirwa kuzviona, sezvo zvisina kujairika kuti izvo zviitike.
Nei makumbo angu ekatsi katsi ari kutadza?